युद्धकी पात्राको डायरी | मझेरी डट कम
kbs — Thu, 11/26/2009 - 21:07
(सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीको प्रेक्षालयबाट 'लडाइँमा जनता'को फोटो प्रदर्शनी हेरेर निस्केपछि मेरो मानसमा युद्धकालीन ती समयहरू पुनरावृत्त भएर आउँछन् एकपटक । पछिल्लोपटक युद्ध साहित्यहरू पढिरहेको थिएँ म । भियतनामी युद्धबारे पढेँ । टोल्स्टोयको 'वार एन्ड पिस' हिजो मात्रै सकेँ । विश्वयुद्धबारे अघिल्लो महिना पढेँ । आज, एउटा डायरी छ मसँग । यसो भनौँ एउटा 'भर्जिन टेक्स्ट' हो यो । यसको पहिलो पाठक म नै हुँ । टीएस इलियटले भोगेको भन्दा अलिकति फरक तर उस्तै युद्धलाई प्रत्यक्ष भोगेकी एउटी पात्रको डायरीका पन्नाहरूउपर विभीषिकाजन्य आँखाहरू दौडाइरहेछु यतिबेला । आधाजति पढिसकेपछि मलाई लाग्यो अब अगाडि पढ्न सक्तिनँ । एक मन लाग्यो यो डायरी मैले फेला नपारेको भए पनि हुने !)
युद्धमैदानः "ठोक् ! ठोक् !!" कमान्डर, आफ्ना मातहतका सिपाहीलाई आदेश दिँदै थियो । त्यो आदेश दिने कार्यसँग उसको कुनै रहर गाँसिएको थिएन । न त कुनै स्वार्थ नै । थियो त केवल बाध्यताको एउटा क्लेश । मध्यरात । माघको पूर्वार्द्ध, चिसोको चरमतामा उनीहरू युद्धजन्य बाध्यता बाँचिरहेका थिए । गोली, बारुदका अहर्निस आवाजहरू । 'ऐय्या' 'आत्था' र 'पानी पानी'को कारुणिक र दर्दनाक चीत्कारहरू । यद्यपि, ती चीत्कारहरू 'एम्युनिसन'को वषर्ासँगै शून्यमा विलीन भएर गएका थिए । मोर्टारको गतिसँगै शिथिल भएका थिए । बस्तीभरकिा कुकुरहरूको एकतमास भुकाइमा आतंकको नयाँ पीडा जन्मिएको थियो । एउटै सीमाभित्र, एउटै आमाका छोराहरू निरन्तर बन्दुकको 'ट्रेगर' खिचिरहेका थिए- एकअर्काको छाती ताकेर । यो उनीहरूको नियति थियो । बाध्यता थियो, न कि रहर ! एउटै लाम्टो चुसेका छोराहरू युद्धभूमिमा कर्तव्यपालन गररिहेका थिए । त्यो युद्ध केका लागि थियो, सायद यस प्रश्नको एउटै उत्तर थियो उनीहरूसँग- शान्तिका लागि । युद्ध र शान्तिका विम्बहरू अथाह थिए उनीहरूले बाँचेको जीवनसँग तर लियो टोल्सटोयको भन्दा अलिकति फरक ! यी बाँच्ने उपक्रमहरूमा धेरैपटक कंगो र सेरालियनजस्तै देश दुखेका थिए उनीहरूलाई । अनि, उनीहरूसँग देश दुख्नुको पीडा एउटै थियो । दिनरात भोकतिर्खा नभनी बन्दुकसँग साइनो गाँस्नु नै उनीहरूको जिजीविषा हो सायद त्यो प्रहर । दुवैतिरका धेरै वीर सपुतहरूले वीरगति प्राप्त गरसिक्दा पनि युद्ध मत्थर हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । एचडी थरुले भनेझैँ 'डू अर डाई'को युद्ध सिद्धान्त आत्मसात् गररिहेका थिए उनीहरू । समरस्थलमा निरन्तर माइकिङ् भइरहेको थियो- 'आत्मसमर्पण गर ।' यद्यपि, बन्दुक र गोलीको आवाज चली नै रहेको थियो ।
एकातर्फ कोही डोकोमा लासहरू बोकेर दौडाइरहेका थिए, अर्कोतर्फ घाइते सहकर्मीहरूलाई चार हातखुट्टामा झुन्ड्याएर सुरक्षित ठानिने स्थलतर्फ दौडाउँदै थिए ।
अचानक, आवाजहरू निस्तेज हुँदै जान्छन् गोला, बारुद र तोपका । एउटा यस्तो अवस्था आउँछ, जहाँ बन्दुकको कुनै पनि आवाज सुनिँदैन । अलिक अनौठो दृश्य देखिन्छ त्यहाँ । दुवैतिर एकएक लडाकू मात्र जीवित रहन्छन् । त्यसपछि हतियार फालेर आ-आफ्नो 'सेल्टर'का लागि भाग्छन् उनीहरू । वरपिर िघरहरू देखिँदैनन् । अलिक माथि डाँडाको टुप्पोमा एउटा मात्र घर देखिन्छ ।
घरको पूर्वदृश्य ः त्यस घरमा एउटी बूढी मात्र बस्िथन् । दुई छोराहरू दुवैपट्टकिा सेना भएका थिए, बाध्यताले या रहरले । घर नफर्केको वषौर्ं भइसकेको थियो । बूढीआमा छोराहरूकै बाटो पर्खेर बसेकी थिइन् । त्यसो त एक छोरी पनि जनमुक्ति सेनामा भर्ना भएकी थिई । बूढा बा कहिले विद्रोही त कहिले राज्यका सेनाहरूले दिएको धम्की र यातनाका कारण बोल्नै नसक्ने गरी थलिएका थिए । पछि छोराहरूकै पीरले यस संसारबाट बिदा भए । युद्धको दिन बूढीआमा जेनतेन एक्लो ज्यानलाई खाना बनाएर बसिरहेकी थिइन् । खान मन लागिरहेको थिएन सायद उनलाई । अचानक, गोला, बारुद र बन्दुक पड्केको कर्कश आवाजले बूढी मूच्र्छा पर्छिन् । केही समयपश्चात् होसमा आउँछिन् तर पनि निरन्तरको बन्दुकको आवाजले गर्दा बूढीआमा पागलजस्तै बन्छिन् र घर छाडेर भाग्छिन् ।
'सेल्टर'का लागि भाग्दै गर्दा, संयोगवश ती दुवै लडाकूहरू त्यही घरमा आइपुग्छन् । जूनको मन्द प्रकाशमा उनीहरूको आकृति धूमिल देखिन्छ । झन्डै १४/१५ वर्षकी एउटी छापामार केटी थिई, निधारमा एउटा तारो भएको रातो रुमाल बाँधेकी । अनुहारभर ित्रासका अवशेषहरू पर्याप्त देखिन्थे । अर्को, सिपाही थियो राष्ट्रको । दुवैको जम्काभेट आँगनमा हुँदा झस्केका थिए अलिकति उनीहरू । कम्ब्याट पोसाक तर निःशस्त्र । चिसो मौसम, शीत पररिहेको थियो एकतमास । त्यसरी नै भोकको आगो दन्किरहेको थियो उनीहरूको पेटमा । दुवैका आँखा जुधे तर शब्दहीन थिए उनीहरू । नियतिको लडाइँ लड्ने दुई प्राणी युद्ध मैदानभन्दा धेरै पर थिए । थकान, भोक र तिर्खाको एउटा तूक थियो उनीहरूसँग यतिबेला । बाँच्नुजस्तो ठूलो कुरा केही पनि रहेनछ जीवनमा । अलिकति सन्नाटापछि, दुवैको आवाज एकैपटक, एउटै निस्कन्छ- 'सरेन्डर' ! स्िथति सामान्यतर्फ उन्मुख हुन्छ त्यसपछि ।
सिपाहीलाई त्यो केटी कताकता देखेजस्तो लाग्छ यद्यपि गोपनीयताका कारण केही कुराको सोधखोज हुँदैन उनीहरूबीच । हुनसक्छ, सामान्य परचिय पनि छिपाएका छन् उनीहरूले । मानौँ, छद्म परचिय गराएका छन् एकअर्काबीच । त्यसो नहुँदो हो त...!
'घरमा को हुनुहुन्छ ?' बोलाउँछन् उनीहरूले । प्रतिक्रिया शून्य भएपछि भित्रै पस्छन् । देख्छन्, एउटा कुनामा एउटा विस्तरा अनि अर्को कुनामा अगेनामाथि खाना झन्डै एक जनालाई पुग्नेजति, मनतातो । मधुरो टुकी तेल सकिएर निभ्नै आँटेको थियो । सायद उनीहरूसँग भोग खप्नुको कुनै सीमा बाँकी रहँदैन अब । पकाइराखेको खाना बाँडेर खान्छन् उनीहरू । खाइसकेपछि उनीहरूको आभामा मन्द सन्तुष्टिको तरंग देखा पर्छ अलिकति । झन्डै अन्तिम प्रहर मात्र बाँकी थियो रातको, उनीहरूसँग आराम गर्नका लागि । एउटा दोलाइँ माग्छ सिपाहीले र छापामार केटीलाई खाटमै सुत्न इसारा गर्छ । आफू भने भुइँको सुकुलमा सुत्छ । त्यसो त अघि खाना खाने बेलामा पनि एक-दुई गाँस भात बढी नै हालिदिएको थियो छापामार केटीको भागमा । र, भोलिपल्ट उज्यालो नहुँदै आ-आफ्नो बाटो लाग्छन् उनीहरू ।
प्रकारान्तरले, समयको परदिृश्य फेरन्िछ । युद्धको अन्त्य हुन्छ । 'क्यान्टोनमेन्ट'मा बस्छन् विद्रोही लडाकूहरू । युद्धमोर्चाका सेनाहरू ब्यारेक फर्काइन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रत्यक्ष निगरानीमा शान्ति प्रक्रियाको थालनी हुन्छ, युद्धस्तरमा ।
डायरीको अन्तिम पृष्ठ ः '...क्यान्टोनमेन्ट'मा हामीलाई राखिसकेपछि प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । प्रमाणीकरणको क्रममा मेरो उमेर १८ वर्ष नपुगेकाले घर फर्काइन्छु म । फर्केपछि स्कुल भर्ना हुन्छु म पुनः आमाले पर्खाइराखेको बाटोले मुक्ति पाउँछ अब । यद्यपि, अर्को पीडा थियो मेरी आमासँग- मेरो दाइको पीडा । दाइ घरमा नआएको पाँच-सात वर्ष भइसकेको थियो । झन्डै, त्यति नै समयमा फर्केकी थिएँ म पनि । दाइ सेनामा भर्ना भएको पनि १२ वर्ष भइसकेको थियो । मैले त झन्डै अनुहार नै पो बिर्सिसकेँ कि क्या हो ! यति लामो समय भइसक्यो । परदिृश्य बदलिइसक्यो । देशले नयाँ कलेवर फेरसिकेको छ । दाइ कता होलान् ! के गर्दै होलान् ! अब त बिदा पनि पाउनुपर्ने ! त्यसो त दाइ पनि देशकै निम्ति लड्न गएका हुन् । म पनि त देशकै निम्ति लडेर फर्केकी हुँ नि ! देश र जनताकै मुक्तिका लागि । आमालाई यसरी रुवाएको, यति धेरै रगत बगेको पनि देशकै लागि त हो नि ! आज किन किन मनका सम्पूर्ण कुराहरू डायरीका पन्नामा सिमांकन गर्न मन लागेको छ ताकि मेरो मनमा ती कुराहरूले पुनः प्रवेश नगरुन् । दाइको एउटै फोटो पनि छैन घरमा । युद्धका बेला सबै नष्ट गरनि् आमाले । मन नहुँदा नहुँदै पनि उनको बाध्यता थियो, छोराप्रतिको ममता थियो । त्यसो त मेरा सम्पूर्ण तस्िबरहरू पनि त त्यसै त गरनि् नि आमाले । किन किन दाइको यादले खुबै सताएको छ आज...। - सिमाना'
उपसंहार ः आज तिहारको दिन । भाइटीकाको दिनसम्म दाइ आइपुग्ने खबरले फुरुंग छे, सिमाना । एउटी बहिनी जो दाइलाई टीका लगाउने प्रतीक्षामा छे । सायदै याद छ वर्षौंअघि दाइलाई लगाइदिएको टीका । थालीभर िटीका, सयपत्रीको माला अनि मीठा-मीठा परकिारसहित दाइ आउने बाटो पर्खिरहेकी छे सिमाना । तत्क्षण पर गाउँको बाटो हुँदै यतै आउँदै गरेको आकृतिउपर पर्छ सिमानाको आँखा । आमालाई बोलाउँछे । नजर फाल्छिन् आमाले पनि त्यतैतिर । उनलाई पक्का हुन्छ, त्यो आकृति उनकै छोरो धनेको होे । सिमानाको खुसीको कुनै पराकाष्ठा रहँदैन । धने तगारोबाट भित्र पस्नै लाग्दा सिमाना ऊतिर दौडिन्छे तर नजिक पुगेर टक्क रोकिन्छे । आँखा जुध्छन् उनीहरूका । सिपाहीले त्यो छापामार केटीलाई चिन्छ र त्यो केटीले पनि सिपाहीलाई चिन्छे । उनीहरूको वाक्य घाँटीमै अड्किन्छ । सन्नाटा छाउँछ त्यहाँ । दुवैको आँखाको डिलसम्मै आँसु टिल्पिलाइसकेको हुन्छ । आफूलाई थाम्नै नसकेपछि दाइतर्फ हुत्तिन्छे सिमाना । धने, बहिनीलाई अँगाल्छ र फकाउन थाल्छ ।
नेपाल साप्ताहिक ३७०